Isilimela 2, 2018 admin
Visa kokulungisa eYurophu Iimbalasane engamandla Cryptocurrency Iintlawulo
technology Intlawulo ulungiselele abathengi ehlabathini kwinqanaba eliphezulu lula. Ukuba oku akusebenzi njengesipapashwe, le meko iya kuba yingxaki kakhulu. Visa wabandezeleka kucime enkulu kulo lonke elaseYurophu ngenxa phantse imini ngoLwesihlanu. Oku kubonisa isidingo izisombululo ezizezinye, kubandakanywa imali kunye nokuba cryptocurrency.
Ukungaphumeleli visa eYurophu
Abathengi kunye namashishini lonke elaseYurophu waba nobunzima intlawulo enkulu ngoLwesihlanu. Nabani na ozama ukwenza imicimbi ngokusebenzisa ikhadi yentlawulo Visa kusenokwenzeka ukuba iingxaki. Intengiselwano azikuvumeli okanye akunakwenzeka ukuba ukugqiba. Amaziko Financial wada wacebisa abathengi ukuba asebenzise imali okanye ezinye iindlela yentlawulo. Mastercard waye azichaphazeleki koku mba.
Visa liye ngokukhawuleza wabonisa ukuba intengiselwano intanethi ubunzima ngaphantsi kule nkalo. iintengiselwano Point-of-yentengiso wahlala “hit futhi miss” kuba phantse imini. Ukusetyenziswa ikhadi licwecwe ngokuthenga ezincinane waba kunokwenzeka kwiimeko ezininzi. Konke oku kubonisa inkqubo yezimali kangakanani abasesichengeni ukuba iingxaki zobuchwepheshe.
Iziganeko ezinjengezi badla ukuba iziphumo ebezingalindelekanga. ATM ezahlukeneyo kwi UK basebenzisa up koovimba babo imali emva kwemini. Nangona le ngxaki yasonjululwa, i ingxelo esemthethweni akanikwanga. Kube lula makhadi usebenza kuphela xa izibonelelo entsonkothileyo yokucakaca ezi ntlawulo isebenza ngokufanelekileyo. Ngokuba Visa, ukuba kude kwimeko izolo.
Imfuneko cryptocurrency and cash
Uninzi kubathengi kusekho imali ekhoyo ukusingatha iimeko ezinjalo. Nangona nolo silelo azixhaphakanga kakhulu, kokuba yenzeke nini. Ngoko ke, akuthandeki ukuba ukusetyenziswa imali iya kuze kuncitshiswa ngokupheleleyo. Ukugweba kule eyehlele wokugqibela, Kusenokwenzeka ukuba nomntwana the best.
Ukwengeza, i visa umba ibonisa ukuba indlela engenye yentlawulo zikwafuneka. Ngokungafaniyo amakhadi imali kunye nemali, cryptocurrencies ungagcina imini ngamaxesha ezifana nezi. Nakuba hexa yabo, ezininzi iziqhubekisi intlawulo zikhona ukusingatha imicimbi cryptocurrency kungakhathaliseki nokungazinzi kwamaxabiso yethutyana.
Abathengi kunye namashishini kufuneka sinikele ingqalelo kwezi iindlela. Yindlela elungileyo ukugcina befumana imali esesandleni, kodwa ke ifuna ikhadi intlawulo efanelekileyo ukurhoxa i ATM. Cryptocurrencies i inketho, nakuba namhlanje ukuba yamkelwe kuphela nje kubathengisi ezimbalwa. iingxaki enjalo ukutshintsha msinyane elo thuba kunokuba lifike sekudlule ixesha.
Ingxelo Daily Market Kraken for 02.06.2018
$131M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Huobi crypto exchange izicwangciso Brazil ukwanda
Huobi, a cryptocurrency exchange enkulu ekuqaleni e China, Ukubekela up shop e Brazil.
Ummeli ovela Huobi Group iye yaqinisekisa nenjongo zenkampani ukungena kwimarike Brazilian.
Iinzame iphawula elinye inyathelo kwizicwangciso Huobi ukuze ukwanda jikelele.
Blockchain News 21 EyoMqungu 2018
Pavel Durov ucela ukusetyenziswa ...
Ethereum Wallet ImToken uye $ 35B efakwa, engaphezulu kwe 99% yeebhanki US
Bitmain kwi t yayo indlela ...
Post Next:Ethereum Wallet ImToken uye $ 35B efakwa, engaphezulu kwe 99% yeebhanki US